नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरी नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान गर्ने बीपी कोइरालाहोऊन् वा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट परिवर्तन ल्याउन अग्रसर भएका झापा विद्रोहीहरू, आफ्नो उद्देश्यलाई सजिलो पार्न कुनै न कुनै रूपले हिंसात्मक माध्यमको प्रयोग नेपाली राजनीतिमा सबैले गरे ।
तीन करोड नागरिकलाई त्यस पार्टीको हातमा देशको भविष्य सुरक्षित भएको सन्देश दिन सक्ला ? लाखौँ कार्यकर्ता जो विभिन्न कारण र संयोगले नेकपासँग गाँसिएका छन्, उनीहरूलाई पार्टीको स्वस्थ राजनीतिप्रति आश्वस्त बनाउन सक्ला ?
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७६ ०८:०४
ओरेकको तथ्यांक अनुसार, घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिलामध्ये ३५ प्रतिशतको १६ वर्षभन्दा कममा र ५९ प्रतिशतको १७ देखि २५ वर्षबीच विवाह भएको पाइन्छ । यो तथ्यले देखाउँछ— बालविवाह र कम उमेरमा हुने विवाह घरेलु हिंसाको अर्को कारक तत्त्वहो । सानैमा विवाह भएका महिला राम्रो पढ्न र कमाइ गर्न नसक्ने हुन्छन् । चाँडै बच्चा जन्मिने भएकाले शारीरिक रूपमा कमजोर हुने, बूढोजस्तो देखिने अनि उमेर पुगेपछि श्रीमान र श्रीमतीबीचका इच्छा र चाहनाहरू नमिल्ने हुन जान्छ । एक त श्रीमानमाथि पूर्ण आश्रित र अर्कोतिर दुईबीचको चाहनामा बेमेल, अनि हिंसा सुरु हुन्छ ।
वर्ग अनुसार पनि हिंसाको प्रकृति फरक पाइन्छ । निम्न वर्गका पुरुषहरू दिनभरि ज्याला-मजदुरी गर्ने अनि राति रक्सी खाएर झगडा गर्ने, होहल्लागर्ने, पिट्ने गर्छन् । मध्यम र उच्च वर्गमा मानसिक समस्या एवं यातना बढी हुन्छ, उनीहरू इज्जतलाई प्रधानता दिन्छन्, त्यसैले इज्जतकोडरले भरसक घटना घरभित्रै सामसुम पार्छन् । यो त्यति बेला विस्फोट हुन्छ, जब सबै कुरा बिग्रिइसकेको हुन्छ ।